युगसम्बाद साप्ताहिक - अब कसरी संविधान ?
Tuesday, 04.07.2020, 09:56am (GMT+5.5) Home Contact
अब कसरी संविधान ?
Tuesday, 10.21.2014, 10:38am (GMT+5.5)
संविधान लेखन कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यतिबेला मुलुकको नयाँ संविधानको मस्यौदा जनताको हातहातमा हुने थियो र उनीहरूले राय सुझाव दिइरहेका हुने थिए । तर पहिलो संविधानसभाले जस्तो नियति भोग्यो दोस्रो संविधानसभाले पनि त्यस्तै नियति भोगिरहेको छ । सहमति सहमति भन्दाभन्दै कार्यतालिका सार्दै जाने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल मात्र चलिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र कार्तिक महिनाभर जनताको रायसुझाव लिने कार्यतालिका थियो तर अब संविधानको मस्यौदा बनाउने र जनताको राय सुझाव लिने तालिका फेरबदल हुनेछ । विस्तारै यो क्रम बढ्दै जाँदा संविधान जारी गर्ने मिति समेत बदलिनेमा कुनै शंका छैन । अब मुलुकले सहज तरिकाले संविधान पाउँछ भन्नेमा कमैको मात्र विश्वास छ ।
नेताहरू माघ ८ गते सहमतिमै संविधान जारी गर्ने कुरा जति भट्याए पनि त्यसप्रति उनीहरूको इमान्दारिता देखिएको छैन । संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने समय चार महिना पनि बाँकी छैन । समयको ख्यालै नगरी सहमति–सहमति भन्दै समय बित्दैछ । जतिसुकै वार्ता, छलफल र संवाद भए पनि नेताहरूमा इमान्दारिता र जिम्मेवारीबोधको अभाव प्रशस्त देखिएको छ । मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएर संक्रमणको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध अभ्यास हुनै सकेको छैन ।
संविधानसभाले पछिल्लोपटक सहमतिका लागि थपेको म्याद असोज ३० गते सकियो । अब प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन तर पुनः सहमतिका लागि समय माग्ने गृहकार्य भैरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै समय थप्दै जाने गर्दा मुलुकले निर्धारित समयमा संविधान नपाउने लगभग पक्का जस्तै छ । यस्तो स्थितिमा रातदिन मेहेनत गर्नुपर्ने नेताहरूको व्यापक गैरजिम्मेवारीपन छताछुल्ल भैरहेको छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनका बेला दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण पनि गरेका थिए तर संविधानसभा गठन भएर संविधान लेखनको अभ्यास जब थालियो तब विरोधाभाषी पूर्व अडानहरू नै छरपस्ट भैरहेका छन् । सहमतिमा संविधान जारी गर्न दवाव दिने भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीसहित मधेशवादी दलहरू सडकमा उत्रेको छ । उसले सहमति गर्न दवाव दिनकै लागि आन्दोलन गरेको दावी गरेको छ । छलफल, बहस र अन्तरक्रियामार्फत विवादहरूको छिनोफानो गर्ने कि सडकमा भीड उतारेर गर्ने ? भीडको निर्देशनले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि अरु सकस दिन्छ भन्ने विगतका सहमति र सम्झौताहरूले प्रष्ट देखाइसकेको भए पनि जिम्मेवार नेताहरू सहमति गर्ने भन्दै विमति सिर्जनातिर लागेका छन् । एकले अर्कोलाई सहमतिका लागि लचक नभएको आरोप लगाउँदैछन् । संविधान मुलुकको सुखद् भविष्यका लागि हो भने दलीय आग्रह र स्वार्थ त्यसमा हावी हुनुहुँदैन तर यहाँ राजनीतिक दल विशेषको स्वार्थका कारण संविधानका विषयवस्तु अलमलमा परेका छन् । संविधान राष्ट्रिय एकता अरु मजबुत बनाउने र आर्थिक–सामाजिक विकासको नयाँ चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने गरी बनाउनुपर्नेमा सडकमा लागेका नाराका आधारमा बन्नुपर्ने अडानले गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
कार्यतालिका अनुसार काम नभएपछि अब सहमतिका लागि कति समय थप्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कसरी सबैलाई सहमत गराउने भन्ने अहम् सवाल उत्पन्न छ । सहमति हुन नसके के गर्ने र प्रक्रियामा सबैलाई सहमत गर्न नसके के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूको सोच पुग्नै सकेको छैन । संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि अनुसार प्रक्रियामा जानु विधिसम्मत कुरा हो तर सहमति हुनैपर्छ भन्दै आफ्नो अडानबाट टसको मस नहुने र सडक तताउने पक्षले अर्को विकल्प खोज्न सकेका छैनन् भने सत्तापक्षले पनि यसको विकल्प दिन सकेको छैन । यदि सहमति पनि नहुने र प्रक्रियामा जान पनि नसकिने हो भने विवादित विषयलाई जनताको माझमा लैजानुको विकल्प छैन । संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जाने विषयमा नै आम सहमति छैन । एउटा ठूलो समूह यसको विपक्षमा उभिएका छन् । संविधानसभाभित्रै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत अन्य दलहरू यसको विपक्षमा छन् र यी विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर यो विषयमा प्रमुख दलहरूको कुनै चासो छैन । सहमति पनि नहुने र प्रक्रियामा जाँदा पनि बिरोध हुने हो भने जनमतसंग्रहबाट यी विषयहरूलाई टुंग्याउनुको विकल्प छैन । मुलुकलाई सहमति भएन भनेर कहिलेसम्म संविधानविहीन राख्ने ?
अहिलेको स्थितिले आम सहमतिको वातावरण धुमिल बन्दै गैरहेको छ । सकेसम्म विवादरहित ढंगले समस्याको समाधान गर्ने विकल्पको खोजी गर्नु सकारात्मक कुरा हो तर मनमा तुष बोकेर गरिने छलफलबाट कुनै निकास निस्कदैन । विवादहरू जहाँ पनि हुन्छन् र ती विवाद हल गर्ने अनेक उपाय छन् । अब सहमति–सहमति मात्र भन्ने कि यसको विकल्पमा पनि सोच्ने भन्नेतिर दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।